Sababta Ay Raggu Uga Cimri Gaaban Yihiin Dumarka
(Hadhwanaagnews) Friday, December 07, 2018 14:17:11
Robert waxa uu sheegay kala cimridheeraanta ragga iyo dumarka laga arki karo xarumaha daryeelka dadka waaweyn
Washington (HWN)- Xaaskiisa ayaa weydiisay, “Maxaad mar kasta ugu malaysaa in aad iga hor dhiman doonto?” Waxa ay ku noqotay su’aal ka yaabisay. Laakiin runtu waxa ay tahay in ay hore maskaxdiisa u degtay xaqiiqada uu maragga ka yahay ee ah in raggu ay ka cimri gaaban yihiin haweenka. Waxa uu si kooban ugu yidhi, “Tirakoobyada la sameeyey ayaa sidaas muujinaya” Ereyadan waxaa maqaal uu qoray ku furfurtay Robert Schmerlin, oo tifatire ka ah bog ay kuliyadda caafimaadka ee jaamacadda Harvard ku leedahay internet ka.
Maqaalkan oo lagu faafiyey Joornaal ay isla jaamacaddu soo saarto ayaa uu Robert ku yidhi, “Waa aan ogaa in celcelis ahaan
ay dumarku ka cimri dheer yihiin ragga. Tirakoobyada cilmiga ah ee dalka Maraykanka lagu sameeyeyna waxa ay muujinayaan in celcelis ahaan dumarka Maraykanku ay 5 sano ka cimri dheer yihiin ragga, marka guud ahaan dunida oo dhan la eegana, dumarku ay 7 sano ka cimri dheer yihiin ragga”